4 ndị edemede ukwu nke July 26 Shaw, Machado, Huxley na Matute | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
4 nnukwu ndị edemede a mụrụ na July 26. Shaw, Machado, Huxley na Matute
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | akụkọ sayensị emeghị eme, Ndị edemede, Egwu efu, Novela, Abụọ, Aterlọ ihe nkiri
Enweghị ọtụtụ ụbọchị na kalenda ebe ị ga-eme ememme ncheta ọmụmụ nke ọtụtụ ndị edemede. Ma 26 maka July Ọ bụ otu. Taa ha na-ekekọrịta ụbọchị ọmụmụ ndị edemede anọ dị ukwuu, onye Irishman, onye Bekee na ndị Spen abụọ, nwere ọrụ karịrị amamiihe na amata. Ha bụ GGeorge Bernard Shaw, Aldous Huxley Antonio Machado na Ana María Matute. Na ebe nchekwa ya m hotara ufodu nkebi ahịrịokwu na ọrụ ya icheta ha.
1 26 maka July
1.2.1 Iji akọrọ elm
26 maka July
Shaw mụrụ na Ireland en 1856. Ọ bụ naanị onye edemede meriri Nobel chọr'inwe na Akwụkwọ na 1925 na Oscar nke Academylọ Akwụkwọ Ihe nkiri maka edemede kachasị mma maka Pygmalion na 1938.
Ndụ abụghị maka ịchọta onwe gị. Ndụ na-agba mbọ imepụta onwe gị.
Anyị na-amụta site na ahụmịhe na ụmụ mmadụ anaghị amụta ihe site na ahụmịhe.
Ntorobịa efuola ndị na-eto eto.
Nnwere onwe pụtara ibu ọrụ. Nke a bụ ya mere ọtụtụ ụmụ nwoke ji atụ ya ụjọ.
Nwoke ahụ anaghị akwụsị igwu egwu n’ihi na o meela agadi. O mere agadi n’ihi na ọ kwụsịrị igwu egwu.
A mụrụ Antonio Machado na Julaị 26, 1875 en Sevilla. Nke kasị nnọchiteanya òtù oku na-aga Ọgbọ nke 98, ọrụ ya bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na-ewu ewu. Ọrụ ya pụtara ìhè karịa nnukwu ihe nketa nke amaokwu ndị anaghị emebi emebi Mkpebi o Ala ubi.
Ahọpụtala m uri a ọkachasị maka na ọ bụ akụkụ ya ihe ncheta mbu nke mbu. Na mba nna nna m ụlọ a akpụkpọ anụ n’elu osisi. M na-agụ ya ugboro ugboro wee lee anya n'ọkụkụ dị n'ubi ahụ n'èzí, obi dịkwa m ụtọ na ọ dịghị onye n'ime ha kpọrọ nkụ.
Iji akọrọ elm
Na ochie elm, kewaa site na àmụmà
na ọkara ya rere ure,
ya na udu mmiri Eprel na onwa May
ụfọdụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ apụtawo.
Otu narị afọ elm n’elu ugwu
nke ahụ na-egbu Duero! Osisi uhie
stains na whitish ogbugbo
ka ogwe osisi rere ure na uzuzu uzuzu.
Ọ gaghị adị, dị ka osisi poplar
ndị na-eche ụzọ na ụsọ mmiri ihu,
nke nightingales aja aja na-ebi.
Agha nke ndanda n'usoro
ọ na-arịgo ya, na eriri afọ ya
kẹle ẹphe nọdu ndzụ.
Tupu m kụtuo gị, Duero elm,
jiri anyụike ya na onye na-awa osisi na ọkwá nkà
M na-eme ka ị ghọọ mkpịsị mgbịrịgba,
wagon ube ma ọ bụ yok wagon;
tupu acha ọbara ọbara n'ụlọ, echi,
gbaa onwe ya n'ulo ojoo,
na nsọtụ okporo ụzọ;
tupu oke ifufe ewere gị
ma gbuchapu ume nke ugwu ocha;
tupu osimiri ebugharị gị n'oké osimiri
N'etiti ndagwurugwu na ndagwurugwu,
elm, Achọrọ m ịmara na pọtụfoliyo m
amara nke alaka gị na-acha akwụkwọ ndụ.
Obi m na eche
Ọzọkwa, n'akụkụ ìhè na ndụ,
ọrụ ebube ọzọ nke oge opupu ihe ubi.
A mụrụ Huxley na 1894, na Surrey, n’ezinaụlọ nwere omenaala ọgụgụ isi dị mkpa. Ọ gụrụ akwụkwọ na Eton na, n'agbanyeghị nhụjuanya ọ bụ nwata ezigbo ọrịa nke ahụ mere ka ọ kpuo ìsì ruo ọnwa 18, ọ gbalịrị ịgbake, mana kama ịmụ ọgwụ ọ gụchara Akwụkwọ ndị Bekee. O dere akwukwo mbu banyere ihe omuma ya iji weghachite uzo, Nkà nke ịhụ ihe.
Ma obi abụọ adịghị ya nnukwu ọrụ ya dị egwu nke a maara n'ụwa niile bụ dystopia Happywa obi ụtọ, edere na onwa 4 na 1932. A ọdịnihu na enweghị nchekwube nke ụwa, ebe o gosiputara oha mmadu nke na-achịkwa ọnọdụ uche na ebe ejiri ihe eji akpọ soma eme ihe.
Ndị omeiwu, na-eche na ị maara ihe ọ bụ, wepụtara iwu na-amachibido ya. A na-echekwa faịlụ ndị ahụ. Enwere okwu banyere nnwere onwe, banyere ya. Nnwere onwe ịmara na nhụsianya. Nnwere onwe ịbụ mkpọ a kpọchiri gburugburu na oghere oghere.
A na-enwe ezigbo obi ụtọ mgbe niile ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ụgwọ ihe nhụsianya na-eweta. Ma, n'ezie, nkwụsi ike abụghị ihe ọhụụ dị ka nkwarụ. Na afọ ojuju n'ihe niile enweghị mmụọ nke ezigbo ọgụ megide ọghọm, ma ọ bụ ọmarịcha ọgụ ọgụ megide ọnwụnwa ma ọ bụ megide oke agụụ ma ọ bụ obi abụọ. Obi ụtọ adịghị mgbe ọ bụla.
Ọnọdụ ọnwụ ga-amalite mgbe ọnwa iri na asatọ gachara. Nwa ọ bụla na-etinye ụtụtụ abụọ kwa izu na inlọ Ọgwụ maka Ọnwụ. N’ụlọ ọgwụ ndị a ha hụrụ ihe egwuregwu ụmụaka kachasị mma, a na-enyekwa ha ice cream n’ụbọchị ọnwụ. N'ụzọ dị otú a, ha na-amụta ịnakwere ọnwụ dị ka ihe nkịtị.
Ekpebiri iwepu ịhụnanya nke Nature, ọbụlagodi n'etiti ndị castes dị ala; kwụsịrị ịhụnanya nke Nature, mana ọ bụghị ọchịchọ iri nri njem. N'ihi na, n'ezie, ọ dị mkpa na ha ga-anọgide na-achọ ịla mba ahụ, ọbụlagodi na ha kpọrọ ya asị. Nsogbu ahụ bụ ịchọta ihe kpatara akụ na ụba siri ike maka iwere njem karịa ịnwe mmasị na mbara ala na ọdịdị ala. Ha chọtara ya.
Ma achọghị m nkasi obi. Achọrọ m Chukwu, Achọrọ m uri, Achọrọ m ezigbo ihe egwu, achọrọ m nnwere onwe, achọrọ m ịdị mma. Achọrọ m mmehie.
Ana María Matute mụrụ na 1926 na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ùgwù Spanish edemede. Ọ bụ onye otu Royal Spanish Academy ma dee akwukwo maka ndi okenye na umuaka. Onye mmeri nke otutu onyinye dika Nadal, nke Uwa, ndi nkatọ ma obu akwukwo ndi mba.
Nwatakịrị bụ oge kachasị ogologo ndụ.
Quijote Ọ bụ akwụkwọ mbụ m ji bee akwa, na ọnwụ Don Quixote, maka ihe niile ọ pụtara: :hapụ ara ga-apụ. Nke ahụ jọgburu onwe ya. Ezi mmeri.
Ide m ihe abụghị ọrụ, ọbụnadị ọrụ. Ọ bụ ụzọ ịnọ n'ụwa, ịbụ, ịgaghị eme ihe ọzọ. Bụ onye edemede. Ọ dị mma ma ọ dị njọ, nke ahụ bụ ajụjụ ọzọ.
Ahapụbeghị m nwata, nke ahụ na-akwụ nnukwu ụgwọ maka ya. Innocence bụ okomoko nke mmadụ enweghị ike imeli na nke ha chọrọ iji tọọ gị anya.
Ikwu banyere ihe mmadụ na-ede dị ka ịmịghị otu karama mmanụ dị ezigbo ụtọ: isi ahụ na-anyụ. Ikwesiri imechi ya ma dee, ọ kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » 4 nnukwu ndị edemede a mụrụ na July 26. Shaw, Machado, Huxley na Matute
Michael Moorcock. Echefuru ma eze a na-atụghị anya ya.
Francisco Tejedo Torrent, onye mmeri nke III Carmen Martín Gaite Nrite.